ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လိုးပါတော့ဟယ် မောင်လေးရယ်
ဒီနေ့ မရင်မြတစ်ယောက်ထဲ တောထဲလာခဲ့ရတယ်..။ အိမ်ကလူကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ မနေ့ညက အရက်တွေ အသောက်လွန်ပြီး အရက်နာကျလို့ အိပ်ယာက မထနိုင်ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေရဲ့…။ ဒီထက်ဆိုးတာက မနေ့ညက အိပ်ယာဝင် ဇာတ်လမ်းလေ…။ ကိုယ်တော်ချောက အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၉နာရီထိုးနေပြီ…။ သမီးလေးကတော့ မရင်မြ ဘေးမှာ အိပ်မောကျနေရှာပါပြီ…။ သူ့ယောက်ျား အခုလို အရက်တွေ အများကြီးသောက်တာ မရင်မြ မကြိုက်ပါ..။ အစပထမတော့ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ အညောင်းပြေ အညာပြေပါဆိုပြီး ခွင့်တောင်းလို့ လိုက်လျောခဲ့ပါတယ်..။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ..။ အရက်သမား လုံးလုံး မဖြစ်ခင်ကတော့ တောထဲက အပြန် ရေမိုးချိုး အရက်တစ်ပိုင်းလောက်သောက် ၊ ထမင်းစားသောက်ပြိး ခြံတံခါး အိမ်တံခါးပိတ်ကာ လင်မယားနှစ်ယောက် အိပ်ယာဝင်တော့တာပါပဲ…။
တီဗီဘာညာ မပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ ခေတ်မို့ ရေနံဆီမီးခွက်ကိုသာ သုံးရပြီး ရေနံဆီကုန်မှာစိုးလို့ အကြာကြီးလည်း မထွန်းနိုင်ခဲ့ဘူး…။ ညားပြီး တစ်နှစ်အကြာထိ သားသမီးလည်း မယူကြဘူး…။ဒီတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့…။ အရွယ်တွေကလည်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်တွေမို့ အချစ်ရေးက အစ သန်သန်ထန်ထန် အားမာန်တွေ အပြည့်ပေါ့လေ…။ ညညဆို သူက အရက်လေး တထွေထွေနဲ့ ထင်တိုင်းကျဲ လုပ်တော့တာပါပဲ..။သန်ကသန်ပါဘိနဲ့ မရင်မြတစ်ယောက် အိမ်ထောင့်သုခတွေ လိုအင်တွေ ပြည့်ဝလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့တော့..။ အလုပ်ပင်ပန်းသမျှ ညညဆို ကာမစည်းစိမ်နဲ့ ပျော်ပါးဖြေဖျောက်ရတာမို့ အိမ်ထောင်ဦးမှာ အမြူးကြီး မြူးခဲ့၊ အပျော်ကြီး ပျော်ခဲ့ကြရပါတယ်..။ အဲဒီက စလိုက်တဲ့ အရက်….. အခုဆိုရင် သောက်လာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းက သမီးလေး တစ်သက်တောင် ကျော်ခဲ့ပေါ့..။ သမီးလေးက အခုဆို ၆ နှစ်တောင် ပြည့်တော့မယ်..။ ၂ တန်းတောင်ေ၇ာက်နေပြီ…။ သားသမီး အကျိုးမပေးလို့ထင်ပါရဲ့..။ ဒီတစ်ယောက်မွေးပြီး နောက်ထပ်လည်း မမွေးတော့ဘူး..။ ဒါကတော့ ကံတရားမို့ မရင်မြလည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ..။ မနေ့ညက လုပ်ပုံ ပြောပြရအုန်းမယ်…။ ရွာလည်ပိုင်းကနေ အရက်လေး တမြမြနဲ့ အိမ်ပြန်လာတယ်…။ ပြန်လာတာကို ပြောတာ..။ သူ့လက်ထဲမှာလဲ ငွေက သုံးထောင်ကျော်လောက် ပါတယ်..။ ငွေ သုံးထောင်ကျော်ဆိုတာ နည်းတာမှတ်လို့…။ ဆန်တစ်ပြည်မှ ၆ ကျပ်ခွဲ ခေတ်ကိုး…။ ငွေကလေးကလည်း ပါ..၊ အရက်ကလေးကလည်း ထွေဆိုတော့ ငယ်မူတွေပြန်ပြီး ကမျင်းကြောထချင်လို့နဲ့ပဲ တူပါရဲ့..။ မရင်မြကို ကြုံးထဲ့ပြီး ဖက်နမ်းပါလေရော…။ သွေးသားဆူဖြိုးပြီး ကာမဓါတ်အားတွေ အားကောင်ဆဲ အရွယ်တွေမို့ မရင်မြလည်း ပျော်တာပေါ့လေ…။ ခါတိုင်းဆိုရင် စောက်ဖုတ်ထက် အရက်ကိုသာ သတိရနေတဲ့လူဆိုတော့ …အဟုတ်ကို ပြောပါတယ်…။ မရင်မြ စိတ်ထဲ တကယ်ပျော်မိပါတယ်..။ သမီးကလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေတာဆိုတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ အပွတ်အသပ် အနှိုက်အဆွတွေကို မရင်မြကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး သာယာနေမိတာပေါ့…။ သူကလည်း အားကျမခံ သူ့ယောက်ျားကိုတင်မြရဲ့ လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်က ကိုင်ဆုတ်ရင်း ဆွပေးနေမိတယ်..။ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အပီပြင် နှိုက်ဆွပေးနေတာ မရင်မြတစ်ယောက် ရာဂ စိတ်တွေ ထကြွလာတယ်..။ သူ့ယောက်ျား ကိုတင်မြရဲ့ စိတ်ကို အကဲခတ်မရပေမယ့် သူ့ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထန်ထန်လာပြိး မတ်တောင်လာပြီလေ…။ မရင်မြက ထိုင်ပြီး အနှိုက်အဆွ ခံနေရာက ပက်လက်အိပ်ချလိုက်တယ်..။ အော်…အော်…ပြောရအုံးမယ်…။ မရင်မြ နာမည်နဲက သူ့ယောက်ျား ကိုတင်မြ နာမည်က ရင်မြ တင်မြ အသံက ဆင်တူဖြစ်နေတာကိုး…။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ယောက်ျားပြောဖူးတာကို မရင်မြ ဘယ်တော့မှ မမေ့သေးဘူး…..ဘာတဲ့….
``မင်းနာမည်ရဲ့ အဆုံးက မြ..၊ ငါ့နာမည်အဆုံးကလဲ မြ…၊ ဒီတော့ ကြာသာပတေးနံကွာ..၊ နေ့ချင်းထပ်တော့ မြတ်သတဲ့… ညညဆို လိုးတိုင်းလိုးတိုင်း ငါက အပေါ်ကချည်း ထပ်မှောက်လိုးရတာဆိုတော့ အဟဲ…ဟဲ …။ ပြီးတော့ မင်းနာမည်ရဲ့ ရှေ့ဆုံးအလုံးက ရင်…၊ ရင်ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူး…….၊ ငါ့နာမည် ရှေ့ဆုံးအလုံးက တင် ဆိုတော့ စနေ…စနေဗုဒ္ဓဟူး ရူးတောင် ကြီးပွားဆိုပဲဟ.. မိန်းမရ….``
ဒီလိုပြောပြီး တဏှာရူးကြောတွေထပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် လိုးလိုက်ကြ…၊ ခံလိုက်ကြတာ ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာကြီး…။ သူ့ယောက်ျား ကိုတင်မြက ဒီလို နောက်တောက်တောက် လူမျိုးပါ…။ ထားတော့….စောစောက အကြောင်း ပြန်ဆက်ရအောင်…။ မရင်မြက ပက်လက်အိပ်ရင်း ဆက်အနှိုက်ခံနေရတယ်…။ ငွေ ၃၀၀၀ ကလဲ ရထားဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့… လေ…။ တောအရပ်မှာ ငွေ ၃၀၀၀ ဆိုတာ တကယ့်ကို နည်းတာမဟုတ်ဖူး…။ နှိုက်ရင်း နှိုက်ရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ရွ ရွလာတယ်…။ ဒုတ်နဲ့ အတို့ခံရတဲ့ ဂုံညှင်းဖားကြီးလို ၊ ရာဂမာန်တွေကြွတက်လာပြီး ခုံးထဖောင်းကြွနေပြီလေ…။ အတွင်းကလဲ တလှုပ်လှုပ် တရွရွနဲ့ ရွစိကို ထိုးနေတော့တာပေါ့…။ မရင်မြကလည်း သူ့လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်က ဆုတ်ကိုင်ပေးနေရတာကို အားမရလှတာနဲ့ ပုဆိုးပင့်လှန်ပြီး လီးကြီးကို ထိထိမိမိကြီး ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဆွပေးလိုက်တယ်..။ ကိုတင်မြတစ်ယောက်လည်း သဘောကျ ကျေနပ်နေတော့တာပေါ့…။ အရက်က တော်တော်လေး သောက်ထားတာမို့ မူးယစ်ရီဝေတဲ့ အရသာနဲ့ အတူ လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ဆွပေးနေတဲ့ အရသာကိုပါ တစ်လှည့်စီ ခံစားနေမိတယ်.။ ကိုတင်မြလီးက နည်းနည်းနောနောဟာကြီး မဟုတ်ဘူး…။ လက်တစ်ဆုတ်စာမက တုတ်လွန်းပြီး အရှည်က တစ်ထွာကျော်ကျော်လောက် ရှိတယ်....ဆိုပါတော့ ….၇ လက်မခွဲလောက်ပေါ့…။ စောက်ဖုတ်အခေါင်းထဲ မကြာမကြာ အောင်းရလွန်းလို့နဲ့ တူပါရဲ့…။ လီးတန်ကြီးက မီးသွေးရောင် တောက်ထနေသလိုပဲ…။ ပြဲအာနေတဲ့ ဒစ်ထိပ်ကြီးကတော့ နီညိရောင်သန်းပြီး တင်းရင်း ဖူးအာနေတာပေါ့လေ…။ မရင်မြ လီးတံကြီးရဲ့ အရေပြားတွေကို အရင်းဖက်ဆွဲဆွဲ လှန်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စိတ်ပါလက်ပါ ဂွင်းတိုက်သလို လုပ်ပေးနေတယ်…။ တစတစနဲ့ ကိုတင်မြ လီးကြီးဟာ စောစောကထက် တင်းကြွလာပြီး လီးကြီးကို ယှက်သိုင်းထားတဲ့ သွေးကြောကြီးတွေပါ ဖောင်းကြွလာတယ်..။ မရင်မြက သူ့အကျီ င်္ ကျယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာကို အထက်သို့ ပင့်လှန်လျက် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖော်ထားလိုက်တယ်..။ ကလေးမွေးတာကလည်း တစ်ယောက်တည်း..၊ အရွယ်ကလည်း ကောင်း…၊ သွေးသားကလည်း ဆူဖြိုးတုန်းဆိုတော့ နို့ကြီးနှစ်မွှာက ဝင်းမွတ်အိထွားမို့တင်းနေတာပါ..။ မရင်မြက လွတ်နေတဲ့ သူ့ယောက်ျားလက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး လုံးဝန်းမို့မောက်နေတဲ့ သူ့နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်..။ အရက်ကလေးက တရစ်ရစ်နဲ့ ကိုတင်မြကလည်း နို့အုံကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပြီး ဖွဖွ ဆုတ်ချေပေးလိုက်တယ်..။ မရင်မြခမျာလည်း ကာမခလုတ်တွေက တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ ပွင့်ထွက်လာပြီမို့ ရမက်သွေးအရှိန်ကလည်း တစစနဲ့ တက်တက်လာပါပြီ…။ ကိုတင်မြက သူ့ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်လိုက်ပြီး ဘေးနားမှာ ပုံထားလိုက်တယ်..။ တဆက်တည်းမှာပဲ မရင်မြရဲ့ ထမီကို လည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်..။ ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားမို့ မရင်မြက ခြေဆင်းပြီး အလိုက်သင့်ပြင်ပေးလိုက်တယ်..။ ရေနံဆီမီးရောင်အောက်မှာ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးက ကိုတင်မြရဲ့ ရမက်ဇောကို ပိုမိုတက်ကြွစေပါတယ်..။ ကိုတင်မြက မရင်မြကို ဘေးတစောင်းအနေအထားဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ညာဘက်ပေါင်တံကြီးကို အထက်သို့ ကွေးတင်လိုက်ပြန်တယ်..။ တင်ဆုံထွားထွားကြီးက မို့မောက် ကားတက်လာပြီး ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာကလည်း အက်ကွဲထွက်လာပါတယ်..။ ကိုတင်မြက မရင်မြရဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်တံအပေါ် ခပ်ဖွဖွလေး ခွထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပေါင်ရင်းကို မရင်မြဖင်ဆုံကြားဆီ တိုးကပ်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ နောက်ကို ပြူးအစ်ထွက်နေတဲ့ မရင်မြ စောက်ဖုတ် စူစူကြီးကို လက်ခလယ်ထိပ်နဲ့ ခပ်ဖွဖွလေး စမ်းလိုက်တယ်..။ နှုတ်ခမ်းသားတွေက ထူပွကြွရွနေတယ်..။ လက်ခလယ်ထိပ်ကိုလည်း စောက်ဖုတ်အထဲ စွပ်ခနဲ ထိုးထည့်လိုက်သေးတယ်..။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက နွေးနွေးရှိန်းရှိန်း စိုစိုစွတ်စွတ်ကြီး ဖြစ်နေပါပြီ…။ အစစ သေချာပြီဆိုမှ တောင်မတ်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို လက်နဲ့ အသာဆကိုင်ပြီး စောက်ခေါင်းအဝမှာ တေ့မြှုပ်လိုက်တယ်..။ အတွင်းသားနုနုတွေက စောက်ရည်ကြည်တွေနဲ့ ရေသမမွှေထားပြီးမို့ လီးထိပ်ကြီးမှာ ဇိခွ နဲ နစ်ဝင်သွားတယ်..။ စောစောက ဂွင်းတိုက်ထားသော အရှိန် ၊ အရက်ရှိန် ကိလေသာ ရမက် အရှိန် စသည့် အရှိန်မျိုးစုံ ထုံမွှမ်းထားသည့်အတွက် လီးချောင်းတန်ကြီး တလျောက် ရှိန်းခနဲ ဖိန်းခနဲ ကျင်တက် ယားဆိမ့်သွားရတယ်..။ ကိုတင်မြက ဖင်ကြောကြီးကို ရှုံ့ခွက်ပြီး လီးကြီးကို အဆုံးထိ ဖိသွင်းလိုက်တယ်…။ ``ဖျစ်…ဖျစ်..ဖွတ်…ဖျစ် ဖျစ်…ဖွပ်…`` ``အ…အင်း…ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်……အ…..အလ…အင့်.ကျွတ်…`` ကလေးတစ်ယောက်သာ မွေးထားဖူးတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖြစ်ရုံမက တစ်ပတ်တစ်ခါ ကျောက်ချဉ်ရေ စိမ် စိမ်ပေးနေသည့် စောက်ဖုတ်မို့ လီးကြီးက စီးစီးပိုင်ပိုင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ဝင်သွားပါတယ်..။ လီးကြီး အဆုံးထိ ဝင်သွားပြီးနောက် ကိုတင်မြက ခဏရပ်ထားပြီး စောက်ဖုတ်အငွေ့ခံကာ နှပ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်..။ နှပ်လို့ အားရတော့မှ သူ့လီးကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ပုခုံးကို ဆုတ်ကိုင်လျက် ကျန်လက်တစ်ဖက်က နို့အုံတင်းတင်းကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက် ညှောင့် ညှောင့်လိုးပါတော့တယ်….။
လီးဝင်လီးထွက် စည်းချက်ကျကျ သံစဉ်တွေထွက်ပေါ်နေသလို ကာမဂီတ ညည်းညူသံတွေကလည်း အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်နေပါတယ်..။ သမီးဖြစ်သူက အအိပ်ကြီးသူမို့ တော်ပါသေးရဲ့..။ ထိုသို့ တစောင်းအနေအထားခွ ဆောင့်လိုးနေရာမှ ကိုတင်မြက သူ့လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ပါတယ်..။ မရင်မြကိုလည်း ပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင် ပြင်ပေးလိုက်ရာ မရင်မြကလည်း အလိုက်တသိ ဒူးထောင် ပေါင်ကားပေးလိုက်ပါတယ်…။ ကိုတင်မြက မရင်မြ ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး အရှိန်ပြင်းထန်နေတဲ့ ထပ်မံမြှုပ်သွင်းလိုက်ပြန်တယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ လီးတန်ကြီးက အထစ်အငေါ့မရှိ ချောချောရှူရှူ ပြွတ်ခနဲ ရွှတ်ခနဲ ဝင်သွားပါတယ်..။ ကိုတင်မြလက်နှစ်ဖက်က မရင်မြကိုယ်ပေါ် ကျော်ခွထောက်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကို ရှေ့အနည်းငယ်ကုန်းလျက် အားပါးတရ အသားကုန်ကြုံးကြုံးဆောင့်ပါတော့တယ်..။
``အင့်…အ…အမေ့…..အ အ……အင့်…အိ..အင့်…..အမေ့….အ ဟင့်….အိ…အ…`` အရက်အရှိန်နဲ့အတူ ကာမအရှိန်ပါ တက်လာပြီမို့ ကိုတင်မြရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက မီးကုန်ရမ်းကုန် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖြစ်နေသလို မရင်မြရဲ့ အကော့အပင့်တွေကလည်း သဲထိတ်ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်..။ ကိုတင်မြရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ အရက်ရှိန်က ပျံ့နှံ့ ဝင်ရောက်သွားပြီမို့ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားနေတော့ပဲ တရှူးရှူး တရှဲရှဲဖြင့် မာန်ထနေသော ဝက်သိုးကြီးလို အငမ်းမရ ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့တယ်..။ မ၇င်မြတစ်ယောက်လည်း လီးအရသာကို ခံစားရင်း ကော့ကော့ခံကာ ငွေသုံးထောင်နှင့် ဝယ်ရမည့် အရာတွေကို စိတ်ကူးယဉ်လျက် ရှိပါတယ်..။ သည်တော့ ကိုတင်မြကာမဇောထန်သလောက် မရင်မြခမျာ နောက်က မလိုက်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်..။ လီးအရသာကလည်း ကောင်း စိတ်ကူးယဉ်လို့ကလည်း ကောင်း မို့ ကာမလိုအင် ပန်းတိုင် ရောက်ရှိရေးမှာ နှောင့်နှေးသွားပါတယ်…။ အရှိန်ပြင်းသော ဆောင့်ချက်တွေနှင့် အတူ ကိုတင်မြ လချောင်းတစ်ခုလုံး ထူပူယားကြွလာပြီး လရေပူပူတွေကို စောက်ခေါင်းထဲ ဗျင်းခနဲ ဗျင်းခနဲ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်..။ စောက်ခေါင်းထဲ ပူခနဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အတွေ့က ကိုတင်မြတစ်ယောက် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မရင်မြကို အချက်ပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်..။ မရင်မြအဖို့ အခုမှ ကောင်းဆဲမို့ ကိုတင်မြနဲ့ ပြိုင်တူပြီးရန် ကော့ ကော့ပြီး ခံဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မမှီနိုင်တော့ပါ..။ တဖြည်းဖြည်း ကိုတင်မြလီးကြီးက အရှိန်သေသွားတာကို သိလိုက်ပါတယ်..။ ကိုတင်မြတစ်ယောက် မရင်မြကိုယ်ပေါ်မှောက်ချရင်း ဟောဟဲဆိုက်ကာ မောပန်းလျက် အမောဖြေနေပါတယ်..။ လီးကြီးကလည်း ပျော့ခွေ ညှိုးနွမ်းလို့ သွားပါပြီ…။ အားအင်လည်း ကုန်ခမ်း အရက်ရှိန်ကလည်း အတက်ကြမ်းနေပြီမို့ မှောက်ရက်တန်းလန်းကြီးဖြင့် ပင် ကိုတင်မြတစ်ယောက် အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်..။ အခုမှ စတင် ကောင်းနေဆဲမို့ မရင်မြတစ်ယောက် အားမလိုအားမရ ဆတ်တငံ့ငံ့ကြီး ဖြစ်နေရှာပါတယ်..။ သူ့ယောက်ျားကိုယ်လုံးကြီးကို ဘေးတွန်းချလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဖြစ်သလို စွပ်ပေးလိုက်တယ်..။ တခေါခေါ အိပ်နေတဲ့ ယောက်ျားကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် တစ်ချက်ကြည့်ရင်း စောင်ပါးတစ်ထည် လွှမ်းပေးလိုက်တယ်..။ သူ့နို့အုံဖွေးဖွေး အိအိကြီးကိုလည်း ဘရာစီယာနဲ့ ဖုံးအုပ်လိုက်ပြီး အနီးမှာ ရှိတဲ့ ထမီကို ရင်လျားဝတ်ရင်း အပြင်ဘက် သေးပေါက်ထွက်ခဲ့တယ်..။ ညဉ့်အတော်နက်နေပြီမို့ တစ်ရွာလုံး တိတ်ဆိတ်ကာ နေလေရဲ့…။ မကောင်းမှုဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ဒီနေရာမှာ သုံးသင့် မသုံးသင့် ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် တွေးမိပါရဲ့..။ အကြင်လင်မယားဖြစ်တဲ့ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား လောကထုံးစံအတိုင်း လိုးကြခံကြတာကို မကောင်းမှုလို့ သတ်မှတ်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား ဟု ဖိုးတုတ် စဉ်းစားကြည့်သည်..။ သူများမယား ကြာခိုပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် လိုးရင် ဒါ အပြစ်ရှိလို့ မကောင်းမှုလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်..။ အခုဟာက ကိုတင်မြက မရင်မြရဲ့ လင် ၊ မရင်မြက ကိုတင်မြရဲ့ မယား…။ ဒီတော့ လင်နဲ့ မယား မို့ လိုးကြခံကြတာ သဘာဝ မို့ အပြစ်မရှိပါဘူး…။ အဲ ခက်တာက ဒီလိုးတယ်ဆိုတာကြီးကို ဘယ်ယောက်ျား မိန်းမမှ လူရှေ့သူရှေ့ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး လိုးကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ…။ လူဆိုတော့ ရှက်တတ်တယ် ထင်ပါရဲ့ ၊ အကောင်ပလောင်တွေကတော့ ရှင်းတယ်..၊ စိတ်ထမုန်ယိုလာလျင် ဘယ်သူ့ရှေ့မှ မရှောင်ဘူး ။ တက်လုပ်လိုက်ကြတာပဲ..။ ဖိုးတုတ်က အသက်သိပ်မကြီးသေးပါဘူး…။ လေးတန်းအောင်တော့ ကိုရင်ဝတ်…။ လူထွက်လာတာ ခြောက်လလောက်ပဲ ရှိသေးတာ..။ ဥာဏ်ကောင်း စာတော်တဲ့သူမို့ စာဖတ်ဝါသနာလည်း တော်တော်ကြီးတယ်..။ ဆရာကြီး ပီမိုးနင်းရဲ့ ကျားမ သဘာဝ အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာတွေ တော်တော်လေး ဖတ်ဖူးနေတဲ့ကောင်..။ ဘယ်ဘဝက ဘယ်လို ပဌာန်းဆက်နဲ့ လာတဲ့ကောင်မျိုးလဲ မသိဘူး..၊ လူငယ်သလောက် တဏှာရူး ကြမ်းမှ ကြမ်း ၊ ပြီးတော့ ဖွားဖက်တော် သူ့ငယ်ပါက အရှည် ခုနစ်လက်မခွဲ ကျော်ကျော်ခန့် ရှိပြီး အတုတ်က ငါးလက်မခွဲခန့် ရှိလေရဲ့..။ သူတို့အိမ်က နွားကောင်ရေ နှစ်ဆယ်ကျော် ရှိတာမို့ လူပျိုပေါက် ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် လူထွက်ပြီး နွားကျောင်းနေရတယ်..။ သူ့လွယ်အိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း စာအုပ် နှစ်အုပ်တော့ ပါလေ့ ရှိတယ်..။ နွားကျောင်းရင်း စာဖတ်တယ်..။ဖိုးတုတ်တို့ အိမ်နဲ့ မရင်မြတို့ အိမ်က ကျောချင်းကပ်လျက် အနေအထား..၊ ဒါပေမယ့် ဖိုးတုတ်တို့က ခြံဝင်းကျယ်တယ်..။ နွားခြံနဲ့ ဆိုတော့ ပေ တစ်ရာ ပတ်လည်လောက်တော့ ရှိတယ်..။ မရင်မြတို့ အိမ်က နှစ်ခန်း သုံးပင် မြေစိုက်အိမ်ပါ.. ။ ဖိုးတုတ်တို့က လေးပင် သုံးခန်း နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်မို့ အပေါ်ထပ် အနောက်ခန်းထဲက ကြည့်၇င် မရင်မြတို့ဝင်းထဲကို အပေါ်စီးက နီးနီးကပ်ကပ် မြင်နေရတယ်..။ မရင်မြက အိမ်နောက်ဖေးက အုန်းပင်ကြီးအောက်မှာ ရေချိုးလေ့ ရှိတယ်..။ ဖိုးတုတ် အပေါ်ထပ် အနောက်ခန်းဘက်နေ ကြည့်ရင် တည့်တည့်ပဲ..။ ဖိုးတုတ်အဖေ နဲ့ အမေက အိမ်အောက်ထပ်မှာ နေကြတာမို့ အပေါ်ထပ် တစ်ခုလုံးကို ဖိုးတုတ် တစ်ယောက်ထဲ အပိုင်စီးထားတယ်..။ သူ့အခန်းထဲကနေ အပေါက်ဖောက်ထားပြီး မရင်မြေ၇ချိုးတာကို ချောင်း ချောင်းကြည့်ရတာ အမော..။ ရေချုိးရင်း ဖြူဖွေးတင်းမို့နေတဲ့ နို့အုံဝင်းဝင်းကြီးတွေကို ထမီလဲတဲ့ အခါ မကြာမကြာ မြင်ရတဲ့ ဖင်ဆုံထွားထွားဖွေးဖွေးကြီးတွေ ..ဒါတွေကို ကြည့် ကြည့်ပြီး ဖိုးတုတ် မနေနိုင်…မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဂွင်းတိုက်မိတာလဲ ခဏခဏပါပဲ..။ နောက်တော့ တဆင့်တက်ပြီး မရင်မြတို့ လင်မယား ညညလိုးတာကို နွားခြံထဲကနေ ခိုးဝင်ပြီး ချောင်းကြည့်တတ်လာတယ်..။ မီးမှုတ်ပြီးမှာ လိုးကြတာဆိုတော့ တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ အသံတွေသာ ကြားနေရပြီး ဘာမှ မမြင်ရဘူး..။ ဒါနဲ့တင် လီးတောင် ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်.. ဒီနေ့ည ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ရေနံဆီမီးခွက်ကြီးထွန်းပြီး အားရပါးရ တုံးလုံးချွတ် လိုးနေကြတဲ့ မရင်မြတို့ လင်မယားကို တွေ့ခဲ့ရတယ်..။ သူရောက်သွားတော့ မရင်မြက ဒူးထောင်ပေါင်ကား ပက်လက်ကြီး အိပ်ပြီး ကိုတင်မြက အထက်က တက်ခွလိုးပေးနေတယ်..။ ကြည့်ရတဲ့ ပုံက အရက်လဲ တော်တော်မူးနေပုံ ရတယ်..။ မကြာခင် ကိုတင်မြ ပြီးသွားလို့ မရင်မြက တွန်းဖယ်ပြီး စောင်ခြုံပေးပုံ..၊ သူမမျက်နှာမှာလည်း လိုအင် မပြည့်ဝလို့ အလိုမကျ ဖြစ်နေပုံ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဘရာစီယာနဲ့ ဖုံးအုပ်ပြီး ထမီကောက် ရင်လျားပုံ . .၊ ပြီးတော့ ပေါင်ကြားထဲက စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့ မဲမှောင်နေတဲ့ စောက်မွှေးအုံ ဘုတ်သိုက်ကြီး …ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် မနေနိုင်တဲ့အဆုံး မတ်တတ်ရပ်လျက်ကြီး ဂွင်းတိုက်လျက် သုတ်ရေတွေကို မရင်မြတို့ အိမ်ထရံမှာ ပန်းပစ်ထားခဲ့တယ်..။ ညအိပ်တော့လည်း တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး..။ တင်းရင်းမို့မောက်ပြီး ဝင်းအိမွှတ်နေတဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံး..၊ ပြီးတော့ ဖြူဖွေးတုတ်ခိုင်တဲ့ ပေါင်တန်တစ်တစ်ကြီးတွေ ရဲ့ အရင်း ခွဆုံရှိ မဲမှောင်နေတဲ့ စောက်မွှေအုံကြီးနဲ့ အတူ ဖောင်းကြွနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး…..ထွားကားပြီး နောက်သို့ ကောက်ချိတ်ကော့ထွက်နေတဲ့ ဖင်အိုးမောက်မောက်ကြီး ….ဒါတွေက မျက်စိထဲမှာ တလည်လည်ဖြစ်ကာ လီးက တောင်မတ်လာပြန်တယ်..။ ဒီတော့လည်း ငြိမ်သွားအောင် ထပ်ပြီး ဂွင်းတိုက်ရပြန်တော့တာပေါ့… ဒီတော့မှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားရတော့တယ်..။
နွားသိုးတစ်ကောင်က နွားမတစ်ကောင်ကို ဇွတ်ကြီး တက်ခွနေလို့ လှမ်းအခြောက် ….နွားမတစ်ကောင်က မရင်မြတို့ အခင်းထဲက ပြောင်းဖူးပင်ကို လှမ်းစားနေလို့ ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ် ဗျာများသွားသည်..။ အချိန်က မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်ခန့်မို့ ဆောင်းနေအရှိန်ဖြစ်လင့်ကစား အတော်လေး အရှိန်ပြင်းသည်..။ ထို့ကြောင့် သနပ်ပင်ကြီးအောက်တွင် စာအုပ်ဖတ်နေရာမှ နွားမကို ထွက်မောင်းလိုက်သည်..။ စောက်ကန်းမက မရင်မြတို့ တဲရှိရာသို့ စွတ်ပြေးသည်..။ ဖိုးတုတ်နေရာနှင့် မရင်မြတို့ တဲမှာ ယာကွက် ဆယ်ကွက်ခန့် ခြားနေသည်မို့ အတော်လေးလှမ်းသည်..။ ဖိုးတုတ်က တဖက်ချောင်းတွင်းမှ ပတ်လိုက်သည်..။ မရင်မြတို့ တဲနားအရောက်တွင် နွားမက သူ့နွားအုပ်ရှိရာသို့ လှည့်ပြန်သွားသည်..။ တဲအပြင်တွင် လှည်းချွတ်ထားခဲ့သဖြင့် လူရှိနေသည်..။ ရေတောင်းသောက်မည်ဟု စိတ်ကူးရင်း တဲထဲအဝင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ဖိုးတုတ် တဲပေါက်ဝတွင် တုံ့ကနဲ ရပ်လိုက်မိ၏…။ ကြည့်ပါအုံး….မရင်မြတစ်ယောက် သူ့ကို ကျောပေးလျက် ပုဇွန်ထုပ်ကွေး ပုံစံ တစောင်းကြီး အိပ်ပျော်နေသည်..။
ဝတ်ထားသည့် ထမီကလည်း လျော့ရဲရဲကြီး ဖြစ်နေသည်..။ ပြီးတော့ တကောက်ကွေးအထက် ပေါင်လည်လောက်ထိ ထမီက လန်တက်နေသည်..။ ခါးတိုလက်ပြတ် အကျီ င်္မို့ ထမီနှင့် အကျီ င်္ အစပ်မှာ လက်တစ်ဝါးစာလောက်ကွာနေပြီး ဖြူနုနု အတွင်းသားတွေကို အထင်းသားကြီး မြင်နေရသည်..။ မနေ့ညကပင် ကိုယ့်မျက်စိအောက်၌ တုံးလုံးကြီးချွတ်ကာ အောက်ကနေ အလိုးခံနေသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယခုလို လူသူဆိတ်ကွယ်ရာ တောထဲမှာ မလုံ့တလုံပုံစံကြီးဖြင့် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရသောအခါ ရာဂလှိုင်းတွေက ဖိုးတုတ်၏ နှလုံးသားကို ဝုန်းကနဲ ရိုက်ခတ်လိုက်သည်..။
ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် စောစောက နွားမတစ်ကောင်ကို ဇွတ်တက်ခွသော နွားသိုးလို ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်သွားရသည်..။ ကိလေသာရာဂစိတ်ကား လူနှင့် နွားသိုး မခြားနားပါပေ..။ ဖိုးတုတ်က လူမို့ စောစောက နွားသိုးလို ဇွတ်ဝင်မလိုးခြင်းသာ ခြားနား၏..။ သို့သော် ဖိုးတုတ်ခြေလှမ်းတွေက ရှေ့သို့ တရွေ့ရွေ့ဖြင့် လှမ်းနေပါသည်..။ မျက်လုံးအစုံကလည်း ထမီစလွတ်သဖြင့် ပေါ်နေသော ပေါင်တွင်းသားဝင်းဝင်းတွေဆီ မျက်တောင်မခတ် စူးစိုက်ကြည့်လျက် ရှိသည်..။ ဖိုးတုတ်က မရင်မြအိုးကြီးအနား တိုးကပ်သွားပြီး လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နေသော ထမီကို ခပ်ဖွဖွလေး အထက်သို့ ဆွဲလှန်လိုက်သည်..။ သည်တော့ ပြောင်းဝင်းတင်းအိနေသော ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာက မွတ်မွတ်ထွားထွားကြီး ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည်..။
ဖိုးတုတ်လည်းချောင်းတလျှောက် ချောက်သွေ့ကွဲအက်လာသလို ဖြစ်လာသည့်အတွက် တံတွေးကို ခပ်မြန်မြန် မျိုချလိုက်ရသည်..။ တဆက်တည်းပင် မနေ့ညက ကာမအလို မပြည့်ဝလို့ မချင့်မရဲဖြစ်နေသော မရင်မြရဲ့ အားမလိုအားမရ မျက်နှာကြီးကို ကွက်ကနဲ ပြန်မြင်မိသည်..။ ကာမလိုအင် မပြည့်ဝသူကို ဖြည့်ဆည်းပေးရခြင်းမှာ ယောက်ျားကောင်းတို့၏ အလုပ်ဟု ပိုင်ပိုင်ကြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချရင်း ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာကြားမှ နောက်သို့ ပြူးထွက်နေသော ညိုညိုမောင်းမောင်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို ငုံ့အကြည့် နွားထီးက နွားမစောက်ဖုတ်ကို မလုပ်မီ နမ်းကြည့်နေသော ပုံရိပ်များက သူ့စိတ်အာရုံတွင် ပေါ်လာသည်..။ သည်အလုပ်ကား လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော ကာမရှေ့ပြေးအလုပ်ဟု ဖိုးတုတ်ကမှတ်ယူလိုက်သည်..။ သဘာဝတရားနှင့် ပတ်သက်လို့ ပြုမူကျင့်သုံးရာ၌ အဟိတ်တိရစဆန်တွေက လူတို့ထက် သာ၏…။ လွတ်လပ်၏..။
လူလုပ်ထားသည့် စည်းကမ်းဆိုတဲ့ဘောင်အတွင်းက လူတွေမှာ ထွက်ရဲသည် မဟုတ်..။ အကောင်ပလောင်တွေလောကမှာ ဥပဒေမရှိ..။ သို့ဖြစ်ရကား ကာမဆက်ဆံရေးအလုပ်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ကို သူတို့စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခွင့်ရကြ၏..။ ယခုလည်း စောက်ဖုတ်ကို မလိုးခင် နမ်းရှုပ်ရမည့် အလုပ်ကို သူတို့ဆီက နည်းနာယူပြီး လုပ်လိုက်သည်..။ ကိလေသာသွေးကြောင့် ပူနွေးနေသော နှာခေါင်းထိပ်ဖြင့် ညိုညိုဖောင်းဖောင်း စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ် အိကနဲ ဖိပြီး တရှိုက်မက်မက် နမ်းရှုပ်လိုက်သည်..။ ငါးဖောင်ရိုး နံ့ကဲ့သို့သော ပြင်းပြင်းရှရှ ရနံ့သင်းသင်းလေးက ဖိုးတုတ်နှာခေါင်းထဲ စူးကနဲ ဝင်လို့သွားသည်..။ ယင်း ရနံ့သင်းသင်းလေးက တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးများကို လှုံ့ဆော်လိုက်သောအခါ ကာမအကြောမျိုးစုံ ဆုံစည်းပေါင်းစုရာ ဖြစ်သည့် သူ့ပေါင်ကြားရှိ လီးတန်ကြီးမှာ ဝုန်းကနဲ ထောင်မတ်လာသည်..။ ပုဆိုးကို ထိုးဖောက်တွန်းကန်ပြီး လီးကြီးမှာ ရှေ့သို့ ငေါငေါကြီး တိုးထွက်လာသည်..။ နှာခေါင်းဖြင့် နမ်းရရုံမျှ မကျေနပ်နိုင်တော့ပဲ…လျှာဖျားဖြင့်ပါ ပွတ်ဆွဲယက်ပေးလိုက်သည်..။ မရင်မြ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်ကနဲ ဖြစ်လို့သွားသည်..။ အိပ်မက်ထဲတွင် သူ့ယောက်ျားနှင့် လိုးနေသည်ကို မြင်မက်နေပြီး ကာမအရသာတွေ့ကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်လျက်သာ ရှိနေပါသည်..။
ဖိုးတုတ်က စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာကို ဖြဲလို့ရနိုင်သမျှ ဖြဲပြီး စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုများကို လျှာဖြင့် ထိုးဆွကလိပေးပြန်သည်..။ ကျိချွဲချွဲ ငံပျပျ စောက်ရည်အရသာက တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကာမအရသာကြောများတလျှောက် စိမ့်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားသည်..။ အရေပြားတွေ စုတ်ပြတ်ကွဲထွက်တော့မတတ် လီးတန်ကြီးတလျှောက် တင်းအက်ဖောင်းကြွလာသည်..။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်မထားနိုင်တော့သည့်အဆုံး မှီသလောက်ပင် သူ့လီးထိပ်ကြီးဖြင့် ညိုမောင်းစိုအိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ဇိကနဲ ဖိသွင်းထည့်လိုက်သည်..။ လီးကြီးက ဒစ်ပြဲအရစ်ကြီးကျော်သည်အထိ မြုပ်ဝင်သွားသည်..။ ထိုမျှလောက်အနေအထားနှင့်ပင် ဖိုးတုတ်က အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေသည်..။ စောက်ဖုတ်တစ်ခါမှ မလိုးဖူးသေးသော လီးမို့ ဂွင်းတိုက်ရသည်ထက် အဆပေါင်း ထောင်သောင်းမက သာလွန်သော အီဆိမ့်ရှိန်းဖိန်းသည့် ကာမအရသာထူးကြီးကို ခံစားနေရသည်..။ အလိုးခံနေသည်ဟု အိပ်မက်မက်နေသော မရင်မြတစ်ယောက်လည်း တကယ့်လီးအစစ်ကြီးဖြင့် အထိုးအဆွ ခံနေရသည်ဖြစ်ရကား တစတစ အရသာတွေ့သည်..။ အိပ်ပျော်နေလျက်ကပင် ဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးလာသည်..။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လီးတန်ကြီး အဆုံးပိုင်းသို့ တရွေ့ရွေ့ချင်း ရောက်လာသည်..။ သည်တော့ လီးဝင်လီးထွက် ပိုနက်လာရာ ဆောင့်ပေးနေသော ဖိုးတုတ်မှာ အရသာပိုပိုတွေ့လာသည်..။ ဖိုးတုတ်က အရဲစွန့်ကာ မရင်မြပခုံးကို တင်းတင်းဆွဲပြီး အားရပါးရပစ်ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ…
အရှိန်ပြင်းထန် အလိုးသန်သော လူပျိုသိုးဖြစ်ရုံမျှမက သူ့ယောက်ျားထက် လုံးပတ် ပိုတုတ်သော လီးကြီးမို့ ယခုကဲ့သို့ အားပါပါ တဆုံးထိဆောင့်ထည့်လိုက်သောအခါ အင့်ကနဲ အသံထွက်သွားပြီး ဟင်ကနဲ နိုးသွားရပါတော့သည်..။ သို့သော် လူးလဲထလို့ မရသေးပါ..။ လက်တစ်ဖက်က အားပါပါဖြင့် သူမပခုံးကို ဖိဆွဲပြီး အတင်းဆောင့်လိုးနေသောကြောင့် လူးထချင်စိတ်မရှိလောက်အောင်ကောင်း လွန်းနေပြီ ဖြစ်ရာ သည်အတိုင်းပဲ ဆက်အလိုးခံနေလိုက်သည်..။ လီးအတုတ်ပမာဏကို မှန်ဆကြည့်ရုံနဲ့ သူ့ယောက်ျားလီးမဟုတ်မှန်း အတတ်သိလိုက်၏..။ အတော့်ကို တုတ်သည့်လီး…… စောက်ဖုတ်အခေါင်းတလျှောက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး အသွင်းအနှုတ် အဝင်အထွက် လုပ်နေသည်မှာ အဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး ပူရှိန်း ကျင်ဆိမ့်နေရ သည်..။ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း သန်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း…။ နွားသိုးရိုင်း တစ်ကောင်နှင့် မခြား အင်အားကြီးမားလှသည်…။
``ဖွတ်…..ပြွတ်…ဖွတ် ဗြစ်……ပြွတ်….ပြွတ်…ပလွတ်….ဗြစ်…ဖွတ်….`` ``ကျွတ်..အ….ကျွတ်..ကျွတ်….အား….ရှီး….အ အ….ကျွတ်…ကျွတ်….``
ကျောဘက်ကနေ ဖိတွန်းဆောင့်လိုးနေသူက ခုချိန်ထိ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိသေး…။ လင်ဖြစ်သူ မဟုတ်မှန်းတော့ အသေအချာသိ၏..။ သို့သော် မ၇င်မြခမျာ ကောင်းလွန်းအားကြီးနေရှာသည်..။ မနေ့ညက အကြွေးကို ခုမှ ဆပ်လိုက်ရသည့်ပမာ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လျက် အားပါးတရကြီး ပစ် ပစ်ခံလိုက်သည်..။
မတူညီသော သံစဉ်တွေ ပေါ်ထွက်နေသည်..။ ဖတ်ဟူသော အသံက ဖိုးတုတ်လဥနှင့် ဖင်ဆုံကြီး ရိုက်ခတ်သံဖြစ်ပြီး…ဖွတ်ဖွပ် ဟူသော အသံက စောက်ခေါင်းအတွင်း လီးဝင်လီးထွက်ရာမှ ပေါ်ထွက်လာသော အသံဖြစ်၏…။ ဖိုးတုတ်က အချက်ပေါင်း တစ်ရာလောက် မနားတမ်း ဆောင့်သည်..။ .ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင့်သည်..။ အသားကုန် ကြုံး ကြုံးဆောင့်သည်..။ မရင်မြ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်း လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ ကျဉ်တက်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်နဲ့ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးကာ အီးကနဲ အသံကြီးနဲ့အတူ စောက်ရည်ပူနွေးနွေးတွေ ဖျင်းကနဲ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်..။ ပူနွေးသော စောက်ရည်တွေ ပက်ဖျန်းခံလိုက်ရသဖြင့် လီးတန်ကြီးတလျောက် နွေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ သည်အရသာမျိုးကား လက်နှင့် ဂွင်းတိုက်ရုံမျှဖြင့် လုံးဝမရနိုင်သော အလွန်ထူးခြားသည့် မေထုန်ရာဂ ကာမအရသာထူးကြီး ဖြစ်ပါတော့သည်..။ ဆက်လက်၍ အချက် ငါးဆယ် ကျော်ခန့် ဆောင့်အပြီးတွင် ဖိုးတုတ်လချောင်းကြီးတစ်လျောက် တစစ်စစ် ယားတက်လာပြီး ကျင်စက်နှင့် အတို့ခံရသလို တုန်ခါလျက် သုတ်ရေပူ ပျစ်ပျစ်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်ကုန်ပါတော့သည်..။ မရင်မြရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ စောက်ရည်ပူတွေနဲ့ လရေပူတွေ ဝဲလည်ခတ်နေတော့သည်.. မရင်မြတစ်ယောက် ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားပြီး ကာမအရသာကို ခံစားရင်း အမောဖြေနေသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲ မြှပ်ထားသော လီးတန်ကြီးမှာ ခုချိန်ထိ မာန်ရှိန်မကျသေးပဲ တင်းရင်းမာတောင့်နေဆဲ ဖြစ်သည်ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာ သိရှိနေရသည်..။ တစ်ချီတစ်မောင်းတောင် ကောင်းကောင်းကြီး လိုးပြီးမှာတော့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ မဆန်းတော့..။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ သတ်မှတ်ချက်ထက် လီးနှင့် စောက်ဖုတ် ညီညွတ်သင့်မြတ်ဖို့ကသာ ပဓာန ဖြစ်သည်..။ ယခု လီးနှင့် စောက်ဖုတ် အဟုတ်ကို သင့်မြတ်နေသည်..။ မနေ့ညက မပြည့်ဝခဲ့သော ကာမဆန္ဒများ ခုတော့ တလုံးတဝတည်း ပြည့်စုံခဲ့ရပြီလေ…။ သည်မျှ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သန်စွမ်းလှသော လီးကြီး ပိုင်ရှင်ကို မရင်မြ သိချင်လာသည်..။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကို ရှေ့သို့ ကျုံ့၍ ခါးကို ကော့ထည့်လိုက်ရာ လီးကြီးက ဘွတ်ကနဲ ကျွတ်ထွက်သွားတော့သည်..။ ဖိုးတုတ်ကလည်း ပေါ့သေးသေးမဟုတ်..။ မရင်မြ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ပြုလိုက်ကထဲက သတိအနေအထားဖြင့် ရှိနေသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကွပ်ပျစ်အောက်သို့ ငုံ့ထိုင်ချလိုက်သည်..။
မရင်မြခမျာ ဖြတ်ကနဲ ပျောက်ကွယ်သွားသော အရိပ်ကိုသာ မြင်လိုက်ရသည်..။ ဘယ်သူမှန်း သဲသဲကွဲကွဲ မသိလိုက်ရပါ..။ တကယ်ပင် ကြောက်ရံွ့ ထိတ်လန့်သွားသည်..။ တစေ သ္ဆ ရဲများ ဝင်ပြီး လိုးသွားသလား…။ မရင်မြ တွေးကာ ကြောက်ရံွ့ စိတ်တွေငယ်ထိပ်ရောက်ပြီး ဝင်းပြောင် အိမွှတ်နေသော ဖင်ဆုံကြီးကို ကပျာကယာ ထမီဖြင့် ဖုံးအုပ်ရင်း ဝုန်းကနဲ ထထိုင်ပစ်လိုက်သည်..။ ထိုအခြင်းအရာကြောင့် ငုတ်တုတ်ကလေး ထိုင်နေသော ဖိုးတုတ်မှာ ကြောက်ဒူးတုန်နေရှာတော့သည်..။ မွှန်ထူနေသော ကာမစိတ်တွေမှာလည်း ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် လွင့်ပြယ်သွားရသည်..။ မရင်မြက အပေါ်မှ ငုံ့ကြည့်ရင်း ဆံပင်ကို ဆွဲမလိုက်သည်..။ ဖိုးတုတ်က တော်တော်နဲ့ မထပဲ ပေကပ်နေသည်..။ တစ်ခေါင်းလုံး ထူပူ ကျိန်းဖိန်းလာတော့မှ မခံနိုင်တော့သည့် အဆုံး မတ်တတ်ရပ်လိုက်ရတော့သည်..။ မရင်မြတစ်ယောက် ဖိုးတုတ်မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရသောအခါ အလွန်အံ့သြသွားသည်..။ ကိုယ့်မျက်စိအောက်တွင် ကြီးလာသည့်ကောင်လေး ..၊ မကြာခင်ကမှ လူထွက်လာသည့် ကိုရင်လူထွက် ဖိုးတုတ်…၊ တဏှာရူး သေနာကောင်လေး…၊ ဟင်….ဒါဆို စောစောက လိုးသွားတာ သူ့လီးပေါ့…… မရင်မြတစ်ကိုယ်လုံး ဖျင်းကနဲ ကြက်သီးတွေ ထသွားရသည်..။ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ကြီးမားတုတ်ရှည်လွန်းလှသည့် လီးကြီးပဲ..။ သူမယောက်ျားက တဖြည်းဖြည်း အရက်ချိုးကပ်လာပြီ…။ ကာမဆန္ဒကိုလည်း ယခင်လို ကျေနပ်မှုရအောင် မဖြည့်စွမ်းနိုင်တော့..။ သည်တော့ သည်ကောင်လေး ဖိုးတုတ်ကို အမိအရ ချည်တုတ်ထားရမည်..။ မရင်မြ ဖိုးတုတ်မျက်နှာကို ခပ်တည်တည် ကြည့်ရင်း… ``စောစောက ငါအိပ်ပျော်နေတုန်း ခိုးလိုးတာ နင်နော်….
`` ဖိုးတုတ်က မည်သည့်စကားမှ မပြောပဲ မရင်မြကို ကြောင်ကြည့်နေ၏..။ မရင်မြက…..
ဖိုးတုတ် အခုမှ တကယ်ကြောက်ရံွ့ လာသည်..။ ကြောက်ရွံ့သည့်အမူအယာတွေက သူ့မျက်လုံးထဲမှာ အထင်အရှားပဲ ပေါ်လွင်နေသည်..။ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နှင့် မိနေသည်မို့ ငြင်းဆန်လို့ မလွယ်တော့….။ သို့သော် စာပေဗဟုသုတကြွယ်ဝသော ဖိုးတုတ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် တော့ အရှုံးမပေးသေး…။
ဖိုးတုတ်က မရင်မြ မမြင်လိုက်ခင်မှာပဲ ငုံ့ထိုင်ချလိုက်သဖြင့် အကြံအဖန် ဇာတ်လမ်းထွင်၍ လှည့်စားကြည့်ချင်သည့်အတွက် ဘူးခံလိုက်သည်..။ မရင်မြအနေဖြင့်လည်း ဖိုးတုတ်ရယ်လို့ ရေရေရာရာ မသိလိုက်ပါ..။ အရိပ်ကိုသာ ဖျတ်ကနဲ မြင်လိုက်ရသည်မို့ တိတိကျကျ မသိ..။ ထို့ကြောင့် တေ စ္ဆ သရဲများ ဝင်လိုးသွားသလားဟု ထင်မှတ်ပြီး ကြောက်စိတ်များပင် ဝင်ခဲ့သေးသည်..။ ထို့အပြင်လည်း ကိုယ့်မျက်စိအောက်တွင် ကြီးပြင်းလာသော ကောင်းလေး၏ လီးမှာ သည်မျှလောက် တုတ်ခိုင်ရှည်လျား ကြီးမားပြီး သည်လောက်တောင် အလိုးသန်သည်ကို မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်မိသည်..။
မရင်မြမျက်နှာမှာလည်း ဇဝေဇဝါ သံသယ အရိပ်တွေ ယှက်သမ်းသွားသည်ကို ဖိုးတုတ်တွေ့လိုက်ရသည်..။ ထို့ကြောင့် ဆက်၍ ဘူးခံသည်..။ ဘူးတစ်လုံးဆောင် အိုတောင် မဆင်းရဲ ဟူသော စကားပုံ ရှိသည်မဟုတ်လား..။
``ကျ…ကျနော် မဟုတ်ဘူး….အိမ်က နွားမတစ်ကောင် အစ်မအခင်းမှာ ဝင်စားလို့ လိုက်ခြောက်ရင်း ဒီဘက်ရောက်လာတာ..၊ ဒီကျမှ မောလို့ ရေသောက်ချင်လို့ တဲထဲ ဝင်လာတာ…၊ ထမီကျွတ်ပြီး တအီးအီး ..တအင့်အင့် နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အစ်မကို ဘာများဖြစ်တာလဲလို့ သိချင်လို့ အနားလာကြည့်မိတာ…၊ ဗြုန်း ဆို အစ်မက ထလိုက်တော့ ကျနော်လဲ ကြောက်လန့်ပြီး ငုံ့ထိုင်လိုက်ရတာ…ကျနော် အစ်မကို တကယ် မလိုးဘူး….``
ပေါင်ကြားထဲက လီးတန်ကြီးက အရှိန်လုံးဝမသေ သေးပဲ တင်းတင်းဖောင်းဖောင်းကြီး ရှိနေသေး၏….။ ဖိုးတုတ် လီးတန်ကြီးကို မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်မြင်လိုက်ရသော မရင်မြတစ်ယောက် နှလုံးသွေးတွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာသည်..။ အားပါး….ကြီးလိုက်တဲ့ လီး……သေချာပါပြီ…စောစောက ငါ့ကိုလိုးတာ ဒီလီးမှ ဒီလီး အစစ်..၊ သူ့အကြံနှင့် သူ အူမြူး ရွှင်ပြလျက်……
``ဒီ လီး မဟုတ်လို့…နင့်အမေစောက်ပတ် လိုးတဲ့လီးလား ဟဲ့…..``
စောစောက တစ်ချီတစ်မောင်း ကောင်းကောင်းကြီးလိုးထားသော မိန်းမမို့ ယခုလို လက်နှင့် ဆုပ်ဖွခြင်း ခံလိုက်ရသောအခါ ဖိုးတုတ်လီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းကြီးလို တင်းကနဲ တင်းခနဲ မာတင်း တောင်မတ်လာသည်..။ သည်အချက်က လူပျိုသိုးတစ်ယောက်၏ ကာမဓါတ်အား သတ္တိတွေ အဆက်မပြတ် ပြည့်ဝနေကြောင်းကို ဖော်ပြရာေ၇ာက်သည်..။ မရင်မြက မလွှတ်သေးပဲ ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ညှစ်လိုက်ရာ နီညိုရောင်သန်းနေသော ဒစ်ပြဲကြီးမှာ အသဲယားစရာကောင်းလောက်အောင် တစ်ထွက်လာသည်..။ လီးကြီး အတွေ့ဓါတ်က လက်ဖဝါးမှ တဆင့် စောက်ဖုတ်တိုင်အောင် ဖြတ်သန်းသွားသည်…။ မရင်မြစောက်အုံကြီးမှာလည်း လှိုက်ကနဲ ဖိုကနဲ ယားကြွလာသည်..။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်လောက်သည်….လီးကြီးက နုနုထွတ်ထွတ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးမို့ ဖိုးတုတ်ပြောတာ ဖြစ်နိုင်လောက်သည်..။ ဒါပေမယ့် ပိုသေချာအောင် ….. ``နင်….ကျိန်ရဲလား….``
ကြောက်စိတ်တွေ ပြေသွားပြီမို့ ဖိုးတုတ်က ရဲရဲတင်းတင်းပင် ပြောလိုက်သည်..။ မရင်မြလက်ထဲမှာပင် ဖိုးတုတ်လီးတန်ကြီးက တဖြည်းဖြည်း ရှည်လျားတုတ်ခိုင်လာသည်..။ ဆန္ဒမပြည့်ဝသော ညတွေ များခဲ့ရသော မရင်မြမှာ ရာဂစိတ်တွေ လှိုင်လှိုင်ကြီး နိုးထလာတော့သည်..။
``ဒါဖြင့် ငါ့ကို ယူမလား…..``
ကောင်လေးက စိတ်ပါလက်ပါ ပြောနေသည်မို့ မရင်မြ သဘောကျသွားသည်..။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပထမဆုံးလိုးဖူးတဲ့ လူပျိုစစ်စစ်ရဲ့ လီးမို့ စွဲမက်သွားမှာလည်း သေချာသည်..။ တကယ်အားဖြင့် မရင်မြသည် ဖိုးတုတ်ထက် ဆယ်နှစ်ကျော် ကြီးသည်…။ ကာမအတွေ့အကြုံတွေ ရင့်ကျက်နေပြီး ကိုယ်နေကိုယ်ထား ပျက်ယွင်းပြီးသော အိမ်ထောင်ရှင် အအိုမို့ မနူးမနပ် ကောင်လေးကို နှူးနှပ်ပြီး အပိုင်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ လူသူကင်းမဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ တောထဲမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးက ရခဲကြုံခဲမို့  တစ်ချီလောက် အားရပါးရ ခံလိုက်အုန်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ သည်တော့ ဖိုးတုတ်စိတ်တွေ ထကြွလာအောင် ညစ်ညမ်းသော စကားတွေနှင့် ဆွပေးလိုက်အုန်းမည်..။
ဖိုးတုတ်က ကွပ်ပျစ်ပေါ် တက်ထိုင်လိုက်သည်..။ မရင်မြက လက်တစ်ဖက်ကို ထောက်ရင်း ကိုယ်စောင်း ခါးလိမ်လျက် ထိုင်နေရာ စွင့်ကားကောက်ထစ်နေသော တင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးမှာ မကြာခဏ ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆွဲငင်ညှို့ယူနိုင်လွန်းသည်..။ ခြေတွဲလောင်း ချထိုင်နေရင်းက ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် မရင်မြ၏ ဖင်ဆုံမောက်မောက်ကြီးကို မကြာ မကြာ ခိုးကြည့်နေသည်…။
``နေစမ်းပါအုန်း….မင်းက မမကို ဘယ်တုန်းထဲက စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲ….ဟင်…..`` ``လူထွက်ပြီးကတည်းကပဲ….မမ…၊ မမ ရေချိုတိုင်း အိမ်ပေါ်ထပ်ကနေ ချောင်း ချောင်းကြည့်နေတာ….``
``ဟွန်း…..တယ်ဟုတ်နေ……ချောင်းကြည့်ပြီး ဘာလုပ်….`` သူတကယ်လုပ်တာကို အပြောရခက်နေသဖြင့် ဖိုးတုတ် ခေတ္တ ငြိမ်နေသည်…။ ``ပြောလေ…မမရေချိုးတာ ချောင်းကြည့်ပြီး ဘာလုပ်တာလဲ….လို့……``
မရင်မြက လက်ထောက်ထိုင်နေရာမှ ကိုယ်ကို မတ်၍ ခါးကိုဆန့်လိုက်ပြီး သူမအင်္ကျီ ကျယ်သီးများကို တစ်လုံးချင်း ဖြုတ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ အပေါ်အင်္ကျီကို လှပ်လိုက်ရာ ဘရာစီယာအတွင်းက အံထွက်ခုံးထနေသော နို့အုံ အိအိကြီးတွေက မို့မောက် ဝင်းမွတ် စိုလက်နေသည်..။ ဖိုးတုတ်က မျက်လုံးကြီးတွေ ကျွတ်ထွက်မတတ် စူးစူစိုက်စိုက် ပြူပြူပြဲပြဲ ကြီး ကြည့်နေစဉ် မရင်မြက သူ့အတွင်းခံ ဘရာစီယာကို အပေါ်သို့ မလှန်လိုက်သည်..။ နို့အုံ ဝင်းဝင်းအိအိကြီးတွေက ဘရာစီယာအတွင်းက ရုန်းထွက်ကာ အိကနဲ အိကနဲ တုန်ခါသွားသည်..။ နို့အုံဖွေးဖွေး တဝိုက်တွင် အကြောစိမ်းကြီးတွေက ယှက်သန်းထားသည်မှာ ကြည့်ကောင်းလွန်းလှသည်..။ ရမက်စိတ်ကိုလည်း ဆူကြွစေသည်..။ သည်တော့ ဖိုးတုတ် ပေါင်ကြားက ဒုတ်ကြီးမှာ ဖြောင်းကနဲ ကြွတက်လာတော့သည်..။ ဒုတ်နဲ့ အတို့ခံလိုက်ရသော မြွေဟောက်တစ်ကောင် ရှူးကနဲ ဒေါမာန်ထွက်လာသလို ရာဂမာန်တွေ ထကြွလာသည်..။
မရင်မြက ရင်ကိုကော့၍ ဝိုင်းဝန် မို့မောက်နေသော နို့အုံ ထွားကြီးတွေကို ရှေ့သို့ တိုးပေးလိုက်သည်..။ တံတွေးတစ်ချက် မျိုချရင်း ဖိုးတုတ်က နို့အုံ နုနုထွတ်ထွတ်ကြီးကို ခပ်ဖွဖွ ဆုတ်ကိုင်သည်.။ နို့အုံအဖျားပိုင်းက အထက်သို့ ငှက်ပျောဖူးလို တင်းရင်းချွန်ကော့ နေပြီး နို့သီးခေါင်းညိုညိုတဝိုက်မှာ စူထွက် ဖောင်းမို့နေသည်..။
ရာဂဓါတ်အားတွေ ပြည့်လျှမ်းနေသော သွေးသားဆူဖြိုး အလှတွေး တစ်ရစ်တိုးပွားနေတဲ့ အအိုမ နို့အုံမို့ လှပစွာ ထုဆစ်ထားသော လက်ရာမြောက် ပန်းပုရုပ်ပမာ အသက်ရှူမှားချင်စရာ…တင့်တယ်လွန်းသည်..။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသော အအိုမတွေက အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော အပျိုမတွေထက် သာလွန်သော အချက်တွေက မရေတွက်နိုင်အောင် ရှိသည်..။ မရင်မြက ဖိုးတုတ်နား တိုးကပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို မလှန်လိုက်သည်..။ ပေါင်ကြားတွင်းက လီးကြီးမှာ ကောင်းကင်သို့ ထိုးတက်တော့မည့် ဆိုဗီယက်လုပ် ဒုံးကျည်ကြီး တစ်စင်းလို မတ်ထောင်နေသည်..။ မရင်မြက ဖိုးတုတ်လီးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ဂွင်းတိုက်သလို ၃၄ ချက်လုပ်ပေးလိုက်ပြီး အရေဖျားများကို လခုံအရင်းထိ ဆွဲဖိလိုက်ရာ နီရဲနေသော ဒစ်ကြီးမှာ ပိုမိုပြူးထွက်လာပြီး တင်းတင်းတစ်တစ်ကြီး ဖြစ်သွားသည်..။ မရင်မြ စောက်ဖုတ်တစ်အုံလုံး အပြင်းအထန် ရွစိထိုးလာသည်..။
နှစ်ယောက်ပေါင်း သုတ်ရည်တွေ အပြင် ခံချင်လွန်းတဲ့ စိတ်ကြောင့် တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေသော စောက်ရည်ကြည်တွေက ဖင်ကြားသို့တိုင် ယိုစီးကျဆင်းလာသည်..။ ဖိုးတုတ်တစ်ယောက် စောစောကလို ကြောက်စိတ်တွေ လုံးဝ မရှိတော့ပါ…။ ကြောက်စိတ်နေရာတွင် ကိလေသာရာဂ စိတ်တွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်..။ သည်တော့ မရင်မြကို ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ရင်သားအစုံကို အနည်းငယ် ဆွဲမလိုက်ကာ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်ပါတော့သည်..။ စုပ်ရင်း လျှာဖျားဖြင့် နို့သီးခေါင်းတဝိုက်ကို လှည့်ပတ်မွှေနှောက် ကလိဆွလိုက်သည်..။ မရင်မြ တစ်ကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးလျက် ကော့ထိုးသွားသည်..။
``အဟင့် ဟင့်….ဟင့်….လုပ်တော့…ကွာ…..မမ မနေနိုင်တော့ဘူး….``
ဖိုးတုတ်ရဲ့ စောစောပိုင်း စိတ်ကူးက မရင်မြကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးရန်ဖြစ်သည်..။ သည်မျှ ရွထနေသော မရင်မြကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီးလိုးရန် မသင့်တော်ဟု ယောက်ျားပီသစွာ တွေးလိုက်သည်..။ သည်တော့ မရင်မြတစ်ယောက် ဖီလင်အောက်မသွားစေရန် သူက ကွပ်ပျစ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်..။ အနည်းငယ် ရွဲ့စောင်းနေသော မရင်မြ ကိုယ်လုံးကို အသေအချာ ပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီး ကွပ်ပျစ်အစွန်းသို့ ဆွဲယူကာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အထက်သို့ ပင့်လှန်၍ ဘေးသို့ ဖြဲကားထားလိုက်သည်..။ သည်တော့ စောက်ဖုတ် ညိုဖောင်းဖောင်းကြီးက ပြူးအစ် အာထွက်လာသည်..။ နှုတ်ခမ်းသား ညိုညိုကြီးတွေ က ဘေးသို့လန်ထွက်နေပြီး အတွင်းသားတွေက နီရဲ တစ်ထွက်နေသည်..။ ဖိုးတုတ်က သူ့လီးထိပ်ကြီးဖြင့် စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်..။ ``စွိ..စွတ်…..ပြွတ်…ဗျစ် ဗျစ်….``
``အီး….အ အ…..အိုး…..ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလဲ…မောင်လေးရယ်.. လိုးပါတော့..ဟယ်…..``
မရင်မြ မျက်လုံးထဲ မီးပွင့်သွားသလားတောင် အောက်မေ့ရလောက်အောင် ပြင်းထန်ထိမိသော ကာမအရသာထူးကို ခံစားလိုက်ရကာ မအောင့်နိုင် မအီးနိုင် ပါးစပ်မှ ထုတ်ဖော် ပြောလိုက်သည်..။ ထိုအရသာထူးကို မိန့်မိန့်မူးမူး ခံစားနေစဉ်မှာပင် ဖိုးတုတ်လီးတန်ကြီးက တစ်ရစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ နစ်နစ်ဝင်လာသည်..။